Qaybtii Shanaad waxay inoo joogtay Salma iyo Subeer oo Casho isku raacay
Salma waxay tuducyadan geeraarka ah, ku muujinaysaa sida ay uga dhab tahay muxubada iyo jacaylka ay u hayso Subeer iyo sida ay u doonayso inay nolosha la wadaagto, waxaanay tidhi:
”Subeerow calaf waa halkiisee, aniga go’aankaygu waxa weeye inaan adiga nolosha kula wadaago ee Illaahow isku keen sin adigoo nabad ah iyo anigoo nabad ah.”
Salma markii ay sheekada halkaa marinaysay ayuu isa soo dultaagay mudalabkii hudheelka oo cuntadii ay dal-badeen u sidda, dabadeedna Salma ayaa hadalkii yara hakisay, balse Subeer oo cabaar aamusnaa si qurux badana u dhegaysanayey weedhaha Salma afkeeda ka soo baxaya ayaa intii cuntada miiska la dhigayey ku tiraabay:
“Salmaay, waata la inaga soo dhexgalaye, malaha waxaaba laynoo qaadan lahaa inagoo sheedakeena iska sii wadana.”
Intaa ka dib, waxa la isugu jawaab celiyey qosol dhoolla caddays ah oo la is dhaafsaday, ka dibna waxa lagu foorarsaday cashadii.
Mudulabkii wuxu miiska soo dhoobay cunto badan oo kala nooc nooc ah, dabadeed Salma intay halacsatay cuntada badan ee hortaal si kaftan ah u tidhi:
“Subeeroow ma waxaad is tidhi Salma waxba deeqsiin maysid, maxaad waxan oo raashin ah u dalbatay, mise waxaagu wa xishood iyo xilqarsiinyo?”
Subeer, wuxu ku hawlan yahay kala habayntii cuntada iyo weelkii lagu cuni lahaa isaga oo wax walba u soo riixaya dhinaca Salma, wuxuna ku tiraabay:
‘Salmaay ha’iga deg-degin aniga ku garanaya inta kugu filan.”
Dabadeed inta ay waxoogaa qosol ah oo dhoola caddays u badan isku jiibiyeen ayay raamsi daymo jaceyl ku badan tahay isla hor fadhiisten.
Inkasta oo Subeer mar mar yara xusuusanayey tegista Salma oo ay meeli yara damqanaysay mararka qaarkood, wuxu haddana habeenkaasi Subeer iyo Salma u ahaa habeen farxadeed aan hore u soo marin ayaamihii jacaylkooda.
Subeer marka laga reebo waxooga werwer ah oo mar mar hoosta ka yara damqa, waxa dareenkiisa ka muuqda farxad iyo niyad wanaagsan.
Sidaa darteed wuxu la qushuucay jawiga niyadsamida xiisaha leh ee ay Salma la hor fadhido, ka dibna Subeer, wuxu hoosta ka xusuustay, heesta ay midhaheeda ka mid yihiin,
“Waxaan idileey ku oon bixi laa,
adigoo idileey aroos ila gala,
adigoo ooridayda noqdoo ubad dhala,
ilwaad quruxeey, ilwaad quruxeey.
haddaanay ku ool
ayaan walba kuma xusuusteen,
sidii ubixii udgoon badaneey,
ilwaad quruxeey, ilwaad quruxeey.”
Subeer markii uu cabaar heesta niyada kaga luuqeeyey ayuu mar qudha si lama filaan ah, fadhigii uga hinqaday, badeedna intii deg deg u dhaqaaqay ayuu yidhi:
“Walaal Salmaay waan soo noqnayaaye wax yar iga raali ahow.”
Dabadeedna wuxu is taagay guri yar oo dhawr tallaabo u jira mutulkii yaraa ee ay gudihiisa ku cashaynayeen.
Subeer hal cabaar ah ayuu suuryo leexsan ku soo oohin dhammaystay, ka dibna wuxu dib ugu soo laabtay gabadhii yaabanayd, isna waydiinaysay tolow ninkii Subeer maxaa helay.
Subeer wuxu soo fadhiistay, isaga oo maqnaanshihii ka cudur daartay, waxayna sii wateen cashadoodii.
Subeer iyo Salma markii ay casheeyeen ee uu Subeer biilkii bixiyey ayey hudheelkii debedda ugu baxeen, waxayna u soo dhaqaaqeen dhinicii baabuurka.
Subeer berito oo kale wuxu doonaya inuu u ambabaxo dekedda Berbera oo ay alaabo uga soo degayso.
Habeenba summad leh, habeenkaasi wuxu noqday hebaankii ay Subeer iyo Salma fursadii ugu badneyd isu heleen tan iyo markii uu bilaabmay waayahooda caashaq, sidaa darteed iyaga oo waxoogaa isu niyad qabow ayey kala hoydeen.
Markii uu waagu beryay ayuu Subeer aabihii ka codsaday inuu ka daayo safarka Berbera, isaga oo cudurdaar ka dhiganaya xannuunka jilibka kaga jira, taas oo uu aabbihiina ka aqbalay, waxaana alaabtii doonay odayga.
Labo maalmood kadib waxa oo baxay sawiradii ay Subeer iyo Salma wada galeen, waxaan sawirada soo qaaday Subeer.
Maalinta uu Subeer sawirada soo qaadayo maalinta ku xigta oo ah berito oo kale aya Salmana dalka ka dhoofaysaa oo Jarmalka u baqoolaysaa Subeer markii uu sawiradii soo qaaday ayuu markiiba isaga oo aan meel kale eegin ayuu u yimi gabadh walaashi ah, wuxuna ku yidhi: “Walaalo sawiradaa Salma ugee, adigaa guriga geli karaayee, ilayn anigu gurigooda ma geli karo’e.”
Ka dibna way ka aqbashay, wayna u gaysay sawiradii.
subaxnimadii ay Salma iyo dadkii weheliyey iska xaadiriyeen garoonka diyaaradaha ee Hargeysa, si ay ugu dhoofaan dalka Jarmalka.
Salma waxa weheliya oo garoonka la jooga labadeedi waalid iyo wiilkii Mursal ee ay ilmaabtiga ahaayeen, lana siiyey iyadoo ay diyaarada wada raacayaan Mursal Salma iyo Salma hooyadeed.
Hase yeeshee waxa Salma garoonka uga sii horreeyey oo salaad hore iska xaadiriyey Subeer, balse Salma taa ma oga.
Markii ay saacadu ahayd 9:00 barqanimo ayey Madaarka soo fadhiisatay diyaaradii ay Salma iyo dadka la socdaa raacayeen.
Diyaaradaas oo ahayd nooca dadka ka qaada waxa lahayd Shirkadda Daallo Airlines oo maalintaa u duulaysay dalka Imaaraadka Carabta.
Iyadoo ay dadkii rakaabka ahaa ee diyaarada raacayey isu diyaarrinayaan inay ka ambabaxaan qolalka nasashada ee Madaarka, una baqoolaan dhinaca diyaarada ayey Salma sheeda ka halacsatay Subeer oo soo taagan meel waxoogaa u jirta, dabadeedna intay soo dhuumatay ayey Subeer ugu tagtay meeshii uu joogay, iyadoo iska qarinaysa waalidkeed iyo dadkii la socday.
Subeer wuxu gacanta ku hayaa silsilalad dahab ah oo uu magaciisu dusha kaga xardhan yahay, ka dibna markii ay Salma isla soo taagtay ayuu guddoonsiiyey, wuxuna ku tiraabay ereyo dardaaran ah oo uu kaga hadlayo silsilada dahabka ah, taas oo uu yidhi: “Salmaay walaal waxaan kugula dardaarmayaa inaad silsiladaa mar walba qoorta ku sidato, si aad markasta oo aad silsilada oo qoorta kuu sudhan eegtoba ii xusuusato oo aynaan u kala duugoobin.”
Salma markii ay silsiladii guddoontay ayey si deg deg ah qoorteeda u sudhay, waxayna u guddoonatay si niyad sami iyo farxad badani ka muuqato, kana waaban inay macfalka ku guddoomato silsilada uu Subeer gacanta ka saaray ee waxay si dhiirani badani ka muuqato qoorta u sudhatay silsiladii, iyadoo ay dad badani isha ku hayaan.
Subeerna markaa wuu hortaagan yahay, waxay ballanqaaday inaanay weliged qoorteeda ka saarayn silsiladaa, isla markaana aanay qalbigeeda ka guurayn xusuusta Subeer.
Iyadoo ay Subeer iyo Salma weli isku maqan yihiin, ayaa loo yeedhay rakaabkii raacayey diyaaradda ay Salma raacayso, ka dibna intay is macasalaameeyeen ayey kala dhaqaaqeen Subeer iyo Salma, waxaana wejiyadooda ka muuqda dareen boholyow xanbaarsan oo uu midba midka kale tebayo.
Waxa kale oo uu isla halkaa ugu dhiibayaa warqad kooban oo u qornayd sidan:-
Dear my love Salma,
Wallaal, waxa maanta inoo bilawday in aynu u kala baadno ama u kala baqoolno boqolaal kun oo Mayl way adag tahay waase laga yaabaa in aynu isku soo noqono ama aynu dib isku aragno waxase laga maarmaana maadaama aad u ambabaxday wadan shisheeye oo leh dhaqamo gooniya oo aanad hore u aqoonin una tahay gabadh walow aad wakhtign tahay xaas ninkale qabo haddana waxa iga dardaarana in aad ku dadaasho daryeelka hooyadeen iyo in aad iska ilaaliso waxyaalaha aadka u foosha xun ee ka jira meesha aad tagayso.
Gacliso, waan ogahay oo waxan ku ahay adduunka madi, aad ayaan u nasiib xumahay balse ma qalbi xumi wax wal oo kasttana waxan ku iloobayaa dhibaatada adag ee haysata hooyadeen Ruun.
Gacaliso, ha ii baqin, ha ii werwerin hadda kuma lihi I ilow oo aan niyadaada ka baxo laakiin waxan kuu leeyahay intaa si aynu noqon Allaa og waa in aynu labadeenuba isku ducaynaa. Waxaanad ila yar akhrisataa erayada aan kuu soo xulay ee heestan:
Dumarkaba aduun baa ii
Dhaawicii horeen qabay
Waxad tahay dhakhtaradii
Nafta iga dhayaysee
Adigaa dhir iyo ubax
Iyo dhool aroor da'ay
Dhul xareedi wadhan tahay
Uga dhigan naftaydoo
Hadduu taarkan soo dhacay
Dhawaan soo baxay kugu yidhi
Ku sidaa ma dheelido
Uma seexato dhinacyada
Illaahay dhantaal iyo
Kumo tuso dhibaatana
Gacaliso, waxan ku siinayaa kalsoonida naftayda sidaa maanta aad u baxday ayay kuu raacday maanta naftaydu waan ogahay oo qalbigaygu mid aan adiga ahayn uma soo jeedo sidaan yeeli lahaana waxan go'aansaday inan kugu aamino amaano midii ugu adkayd oo ah in aad ii hayso, ii ilaaliso, ii dhawrto, ii dhool dhooliso, dhaawaca u diido, dhidibada u taagto sidii wiil dhalaanana dhabta iigu hayso taasoo ah ilaalinta naftayda oo adiga kuu ah ammaano.
Intaa kadib waxan Illaahay kaaga baryayaa oo aan kaaga rajaynayaa in aanad intaad nooshahay cidna u baahan, sidaa iyo nabadgelyo.
Warqadii marku u dhiibay ee ay la dhaqaaqday, Inkasta oo ay ismacasalaameeyeen haddana Subeer kama dhaqaaqin meeshiisii, waxaana ku soo dhacay qalbigiisa maadaama uu in badan dhegaysanayay heesaha jaceylka ah, erayadan:
Waa qallanjo yaabloo
Qurux iyo illaahbaa
u dhammeeyey qaayee
Alleen way qarsoonayd
Qudh markaan u eegaba
Qac indhaha ku siiyaba
Alla igama qaadan
Qalbi nuura ii daa
intu eebbe kuu qoray
caashaqa ka qaadee
Qudh markaan u eegee
Qac indhaha ku siiyee
Kalgacayl I qariyee
wuuna taagnaa ilaa intii ay libdhaysay diyaaradii ay Salma iyo dadkii la socday raaceen, dhawr daqiiqo ka dibna isaga oo Subeer weli meeshiisii taagan ayey Salma iyo Subeer noqdeen dad ku kala nool laba duniyood oo aad u kala fog.
Markii ay libidhay diyaaradii ay Salma raacday ayuu Subeer ka soo baqoolay Madaarka, iyadoo aanay dareenkiisa wax farxad ahi ka muuqan, wuxuna Subeer ahaa qofkii u dambeeyey ee Madaarka ka soo dhaqaaqay, marka loo eego dadkii dadka dhoofaya sii dhoweynayey.
Subeer wixii maalintaa ka dambeeyey wuxu isu arkay nin madi ku ah waayaha jaceylka, waayo waxaa ka tagtay mataantii uu ka weheshan jiray fooraha caashaqa.
Salma waxay socdaalka (Transit) ku sii martay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta, laba maalmood ka dibna waxay tagtay magaalada Boon ee dalka Jarmalka oo ah meeshii loo soo waday inay degto.
Mursal markii uu eedadii Ruun iyo inaabtidii Salma gurigiisa Boon ku yaalay keenay, wuxu markiiba Telefoon kula hadlay aabbihii, wuxuna u sheegay inay yimaadeen, isaga iyo eedadadii Ruun oo odaygaa walaashii ah iyo gabadhii Salma.
Mursal aabbihii hore ayuu ula socday sheekada oo dhan waayo inankiisa ayaa hore ugu sheegay inuu inantii Ruun dhashay doonayo inuu guursado, soona kaxaynayo.
Mursal aabbihii oo aanay walaashii Ruun is arag muddo 15 sanno ah ayaa wiilkiisa ugu jawaabay: “Laba saacadood ka dib ayaan idiin imanayaa.”
Mursal markuu uu Telefoonkii ka soo jeestay, wuxu Eddadii Ruun u sheegay in walaalkeed u imanayo laba saacadood ka dib, ka dibna Ruun farxad darteed ayaa indhaheeda ilmo ka soo qubatay Salma lafteedu way xiisaynaysay aragtiga abtigeed iyo ilma abiyadeed, balse qalbigeeda waxa kaarka ugu weyn ku haya xusuusta Subeer oo muxubada ay u haysaa aanay jirin cid kale oo ay sidaa u jeceshahay.
Subeer markuu uu muddo dheer guriga iska jiifay sidii qof kaneeco hayso ayuu maalintii dambe iyadoo aad moodo sidii qof xannuun ka soo kcay bakhaarkii aabihii yimi, wuxuna bilaabay hawlihii bakhaarka, halkaas oo uu gelinka dambena meel waxbarasho ah tegi jiray.
Subeer inkasta oo uu u muuqday nin waxoogaa dadka soo dhexgelaya oo yara dhaama sidii uu maalmaha qaarkood ahaa, haddana ma aha nin ay qalbigiisa ka baxday Salma, sidaa darteed xusuusta Salma waxay ahayd mid goor walba dhex ciyaaraysay maskaxda Subeer.
Marka la eego sidii uu jacaylka Salma ugu beeran yahay qalbiga iyo dareenka Subeer, waxa lagu tilaami karaa sida shay maandooriye ah, taas oo dhakhaatiirta cilmi nafsigu sheegeen in haddii aan qofka maskaxdiisa laga sifayn inuu dhaawici karo caafimaadka maskaxda, waayo bay yidhaahdeen wuxu dareenka noocaan ahi keeni karaa xannuun nafsaaniya, taas oo dadka qaarkood isla hadlaan ama uu sidaaba xiskiisa ku waayo.
Waxaana la sheegaa ama la arkay dad badan oo dunida ku nool oo uu xiskiisa dhaawacay waaya jacaylka, iyadoo ay xataa arrimo noocaas ahi ka dhaceen Somaliland, taas oo la odhan karo ma yara dhalinyarada uu waalay.
Subeer inkasta oo la odhan karo arrintu weli lama gaadhn heer waali ah, haddana mararka qaarkood wuxu ku dhowaaday inuu isla hadlo.
Xaalku sida uu doono ha noqdee, haddana Subeer iyo Salma waxay ku kala nool yihiin labo meelood oo kala fog waxaana soo dhexgalay qorshayaal oof-wareen ku noqday dareenkoodii caashaq oo uu sababay wiilka ay Salma ilma abtiga yihiin.
Waxaanad moodaa in jaceylka Salma iyo Subeer shabaho kii Cilmi iyo Hodan, waayo Subeer oo markii hore ahaa nin afgaaban oo aan dhalinyarada inta badan dhex galin ayaa wakhtigan waxa ugu darsamay in uu gooni joog noqdo oo uu xataa ka go' reerkooda iyo dhalinyaradii ugu dhadhawayd mar marka dhifta ah ee uu soo galo suuqa waxay dhalinyaradu iyaga oo xamanaya ama aan hadalka ku caddaynayn odhan jireen waa Cilmigii wakhtigan ama Boodharigii Hargeysa.
Wuxu sidii ahaadaba maalin maalmaha ka mida ayaa wiil ay saaxiib yihiin u sheegay in uu Subeer sidan naftiisa u dhaamo waxana dhex martay sheekadan:
Sahal: sidaad la socoto Subeerow adduunku subax-ba waa cayn mana aha wax adiga kuu hor ah arrimaha ku haystaa, ha u malaynin in aanaan ogayn dhibaatada iyo dhibka xoogan ee kugu dhacday laakiin saaxiib waxa keliya ee aan kuu qaban karnaa waxay tahay in aan ku barno gabadh kale si aad u guursato ugana baxdo hawlaha gabadha iyadu go'aankeeda ku meel martay.
Subeer: Wallaal horta qof kale haddaad tahay wax xun ayaa ina dhex mari lahaa waxanan u malaynayaa in aad ilawsan tahay in aan jeclahay, jeclaana doono horena u jeclaa Salma, sidoo kalena waxaanad ogayn in aan Salmi igaga bixin jaceylkii aanu wada qaadnay laakiin aan anigu ahay qofka ku taliyay in aanu sidan kala noqono waayo dhibaato aanay iyadu lahayn ma aha in dusha laga saaro.
isagoo is ilowsan ayaa wuxu yidhi Salmi ma xannuunka islaanta ku dhacaybaa, ma abtigeeda Fiisaha soo diray baa, ma aabaheeda ninka siiyay baa mise waa inaabtigeeda garan waayay in uu iska daayo qofkan qofka jecel. Sahalow saaxiib ma garan karo meel keliya oo ay Salmi gef igaga gashay mana iloobayo inta aan ifka ku noolahay kaana aqbali maayo, haddaad boqolaal hablood oo midiba mida kale ka qurux badan tahay halkan iigu keento.
Sahal waa qofka keliya ee aadka ay iskugu dhow yihiin Subeer ilaa dhalinyaranimadoodii waana nin og in go'aanka uu qaato Subeer sidiisa u soconayo markaa wuxu is yidhi intaa in ka badan haddii aad la sii hadasho waxa laga yaabaa in aad isku xumaataan, waxaanu ku yidhi Subeer "wallaal iga raali ahow waxad jeceshahay aniguna waan kula jeclahay."
Intaa markuu yidhi ayuu Subeer u soo dabcay Sahal waxaanu yidhi: "wallaal mar hore haddaad intaa I odhan lahayd waxa laga yaabi lahaa in culays badani iga bi'I lahaa waayo waxad ahayd gacantayda midig, waxad ahayd qofkii wax kasta oo igu dhaca ila xalin lahaa sida darteed ayaan kuugu sheegayaa in aan dhibaatays nahay wakhtigan aan imika joognana waxan rabaa in aad ii raacdo Boosta si aan ugu diro warqadan Salma."
waa la isa soo raacay waxaana la imanayaa halkii ay ka diri lahaayeen warqada markay dhammaysteen hawshii ayuu Sahal saaxiibkii ku celiyay "oo wallaal mar haddii gabadhii guri yeelatay oo ay tahay xaas nin kale waa maxay xidhiidhkan gaarka ah ee idinka dhaxeeya." Subeer ayaa si dhib yar ugu jawaabay waxaanu yidhi:
"Sahalow umaan jeclayn Salma keliya in aan anigu ku farxo iyadana ka nixiya balse waxad ogaataa in jaceylkaygu uu ahaa in aan u sameeyo inta aan u samayn karo waxa ay ku farxayso guurka hadeerna waxa ku kalifay duruuf haysatay hooyadeed ee ma aha mid ay u guursatay jacayl si kastaba ha ahaatee waan ogahay in aanu nahay laba qof oo kala xaaraantimaysan balse warqada waxa ku qorani marnaba ma aha mid wax u dhimaya gabadhnimada salma iyo dhaqankeeda inta ugu badan ee aan u qorayna waxay tahay xog waraysi xaaladeeda guud iyo halka ay marayaan hawlihii hooyadeed.
Muddo dabadeed waxay warqadii gaadhay gabadhii Salma waxaana goor subaxa ay ku waabariisatay bushqada quruxda badan ee loogu riday box-ka ku yaala gurigeeda hortiisa, markii ay la soo baxday ayaa intii aanay furin waxay dusha ka aragtay magaca ku qoran oo aan ahayn mid hadda ku cusub balse baal dahaba kaga yaala qaybo badan oo jidhkeeda ah, si deg deg ah ayay u furaysaa iyadoo wakhtigan fadhida makhsinkeeda waxaanay ku bilaabmaysaa warqadu sidan:
wallaal, waxan u malaynayaa in aynu kala maqnayn muddo aad u badan waxa kale oo aan ogahay in aan u boholyoobay wada hadalkeenii wada joogeenii iyo wejigaagii furnaa
La Soco Qaybta 7aad